तीन बालबालिकाको शंकास्पद मृत्यु,प्रविधि नभएकै कारण मृत्युको कारण खुलाउन नसकिएको | Sabaiko Online
Home Flash News तीन बालबालिकाको शंकास्पद मृत्यु,प्रविधि नभएकै कारण मृत्युको कारण खुलाउन नसकिएको
तीन बालबालिकाको शंकास्पद मृत्यु,प्रविधि नभएकै कारण मृत्युको कारण खुलाउन नसकिएको
असार १२ गते शंकास्पद रूपमा मृत फेला परेका भोजपुर अरुण गाउँपालिकाका तीन बालबालिका १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीय सुष्मा फुयाल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयाल । फाइल तस्बिर
काठमाडौँ । नौ महिनाअघि भोजपुरको पूर्वी अरुण गाउँपालिका ३ मा भएको तीन अबोध बालबालिकाको ‘शंकास्पद’ मृत्यु अनुसन्धानमा प्रहरी नै उदासीन देखिएको छ । हत्या आशंकामा जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्र गरी तीन तहमा प्रहरी अनुसन्धान गरिए पनि कतैबाट निष्कर्ष आउन नसक्दा स्थानीयमा आशंकासँगै त्रास बढेको छ । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ? किन अडकियो भनी सोध्दा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी निकाय एकले अर्कालाई औंल्याएर पन्छन थालेका छन् ।
अरुण गाउँपालिका ३ का १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीय सुष्मा फुयाल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयालको स्थानीय निर्वाचनताका गाउँमै ‘शंकास्पद’ मृत्यु भएको थियो । असार १० गते साँझ अचानक हराएका तीनै बालबालिकाको शव १२ गते मरेङडाँडास्थित स्थानीय तोरन कार्कीको माछापोखरीमा फेला परेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न निकाय र जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व ‘चुपचाप’ देखिनुले तथ्य सार्वजनिक नहुने र सम्भावित दोषी उम्कने सम्भावना बढेको छ ।
उक्त घटनाबारे सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विराटनगरले एकसाथ एक महिना लामो अनुसन्धान गरेका थिए । उनीहरूको अनुसन्धान ढिलो र शंकास्पद बन्दै गएको स्थानीयको गुनासोपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) टोली नै साउन १३ गते घटनास्थल पुगी एक साता अनुसन्धान गरेर फर्केको थियो । अनुसन्धान अधिकृत दधिराम न्यौपानेको नेतृत्वमा खटिएको सीआईबी टोलीले घटनाबारे सत्यतथ्य ल्याउने अपेक्षा पीडित परिवारले गरेका थिए । तर यतिन्जेलसम्म यथार्थ पत्ता लाग्नुको साटो अनुसन्धान नै सुस्ताएपछि पीडित परिवार निराश छन् ।
‘चाँडै पत्ता लाग्ला कि भन्ने आस थियो, अचेल त कसैलाई वास्तै छैन, घटना त सामान्य पो बनिदियो,’ रञ्जीवका बुबा रवीन्द्र सापकोटा भन्छन् । उनीहरूमा आशाको त्यान्द्रो भने अझै बाँकी छ । ‘ढिलोचाँडो त पत्ता लाग्ला नि !’ मृतक सुष्मा र प्रदीपका बुबा चेतनाथ फुयालले भने । ‘अनुसन्धान’ भन्दै गुपचुप बनाइदिने हुन् कि भन्ने शंका पनि लागेको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी दीपेन्द्र पञ्जियार थारू सम्पूर्ण अनुसन्धान सीआईबीले हेरेकाले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । ‘सीआईबीले हेरेको घटनाबारे हामीले बोल्न मिल्दैन, उतै बुझ्नुस्,’ उनले चासो राख्नेलाई यही जवाफ फर्काउने गरेका छन् ।
सीआईबीका डीआईजी पुष्कर कार्की भने अहिलेसम्मको अनुसन्धानका डकुमेन्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा, डायटम परीक्षण प्रतिवेदन, स्थानीयको बयान र प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा कसैले कर्तव्य गरी मारेको नदेखिएको बताउँछन् । ‘एक लेभलको अनुसन्धान केन्द्र र प्रदेशको चुनावअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । अनुसन्धान बन्द भएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले क्लु भेटेको खण्डमा अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ उनले भने । ‘हामीले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको हो, विस्तृत बुझ्न जिल्लाकै डीएसपीसँग बुझ्नुस्,’ उनले थपे ।
घटना सामान्यीकरण हुँदै जाँदा रिपोर्टहरूमा कर्तव्य नगरिएको देखिनुलाई पीडित पक्ष ‘शंकास्पद’ ठान्छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट पीडित पक्षलाई नदेखाइनु र भोजपुर सदरमुकाममा नगरी शव धरान लैजानुले सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको आशंका पीडितको छ । डीआईजी कार्की भने यो आरोप स्वीकार गर्दैनन् । ‘भोजपुरमा पोस्टमार्टम नगर्दैमा रिपोर्ट लुक्ने होइन, पोस्टमार्टम रिपोर्टका विषयमा सरोकारवालाले छलफल गर्न पाउँछन् तर रिपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । कार्कीले बिनाआधार हत्या भनेर नलेख्न पत्रकारहरूलाई पनि आग्रह गरे । ‘हामीले हदैसम्मको अनुसन्धान गरेका छौं, अनुसन्धान त विशेषज्ञले गर्ने हो, पत्रकारले हत्या गरेको भनेर लेखिदिने कुरा मिलिरहेको छैन,’ उनले भने । केस अदालत नपुगी, अदालतबाट नटुंगी अनुसन्धान टुंगिएको वा सुस्त भएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
प्रविधि नहुँदा अलमल
पोस्टमार्टम गरिएको अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘डाइटम कम्पेयर टेस्ट’ प्रविधि नहुँदा शंकास्पद मृत्यु घटना अनुसन्धान जटिल बनेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । यो प्रविधिले मृत्यु स्वाभाविक, हत्या, आत्महत्या वा दुर्घटना कुन कारणले भएको भन्ने छुट्याउन सघाउँछ । प्रतिष्ठानमा ‘डाइटम कम्पेयर टेस्ट’ प्रविधि जडान गर्न बढीमा ५ लाख रुपैयाँको माइक्रोस्कोप भए पुग्छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयको लिखित स्वीकृति चाहिन्छ । प्रविधि नभएकै कारण बालबालिकाको सामूहिक मृत्युको कारण खुलाउन नसकिएको प्रतिष्ठानको फरेन्सिक विभागले जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका विशेषज्ञले जाँच गर्दा प्रदीपको घाँटीमा खानेकुरा अडकिएको, सुष्मा र रञ्जीवको घाँटीमा चुइगम अडकिएको फेला पारेका थिए । चिकित्सकका अनुसार बालबालिकाको शरीरमा अन्य चोटपटक, दागधब्बा र विषादी थिएन । उनीहरूको मृत्यु डुबेरै भएको वा हत्या गरेर पोखरीमा फालिएको भन्ने छुट्याउन डाइटम कम्पेयर टेस्ट गर्नुपर्ने फरेन्सिक विशेषज्ञको भनाइ छ । काठमाडौं, सामाखुसीस्थित प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले प्रविधि अभाव देखाउँदै ‘डाइटम कम्पेयर टेस्ट’ गर्न नसकेको रिपोर्ट दिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका फरेन्सिक विशेषज्ञ सहायक प्राध्यापक डा. विकास साह र जुनियर रेसिडेन्ट डा. दीक्षान्त पोखरेलको टिमले बालबालिकाको मृत्युको यकिन कारण खुल्न नसकेको भनी साउन अन्तिम साता प्रहरीलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो । डाइटम ल्याब राख्न गृह मन्त्रालयको अनुमति नभएकाले मृत्युको कारण खुलाउन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो । मृतक बालबालिकाको शरीरमा पाइएको र पोखरीको पानीको डाइटम तुलनापछि मात्र मृत्युको सही तथ्य फेला पार्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । देशभित्र यस्तो प्रविधि नभए अन्य मुलुकमा लगेर पनि जाँच गर्न सकिने चिकित्सक टिमले प्रहरीलाई सुझाएका थिए । डीआईजी कार्की भने डाइटम टेस्ट केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले नै गरेको बताउँछन् । ‘मृतकको शरीर र पोखरीको पानीमा पाइने डाइटम समान पाइएको छ,’ उनले भने ।
घटनालगत्तै पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राईले घटनास्थलमा लगिएको कुकुर चुनावी सुरक्षामा खडा गरिएको सेनाको बिटमा पस्न लाग्दा तानिएको अभिव्यक्ति दिएपछि देशभर यो चर्चाको विषय बनेको थियो । डीआईजी कार्कीले यसलाई असत्य भन्दै आएका छन् । ‘हाम्रो काम अनुसन्धान गर्ने हो, कसले के भन्यो, कसो गर्‍यो भन्ने होइन, कसले के बोल्छ, त्योसँग हाम्रो संगठनलाई नजोड्नुस्,’ उनले भने ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूलाई घटना अनुसन्धानको अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी नभएकाले थप बुझेर मात्रै भन्न सक्ने बताए । सांसद सुदन किरातीले भने चाँडै नै सदनमा यो विषय उठाउने बताए । भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्र दाहाल पनि यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘सीआईबीलाई सोध्दा अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको भन्छन्,’ उनले आफूलाई थप जानकारी नभएको बताए ।
घटनाका बेला गोमादेवी चेम्जोङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काजीकुमार आचार्य डीएसपी थिए । अनुसन्धान विवादित बनेपछि उनीहरूको सरुवा भएको थियो ।
पीडित परिवारको बेहाल
घटनापछि पीडित परिवारको बेहाल छ । फुयालको व्यथा सापकोटाको भन्दा फरक छ । सापकोटा कृषिका कर्मचारी हुन् । फुयालले स्थानीय प्याउली बजारमा फेन्सी पसल गरेर घरव्यवहार धान्दै आएका थिए । तीन सन्तानमध्ये दुईको शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनले स्थानीय केशव अधिकारीलाई साढे ४ लाखमा पसल बिक्री गरे । शव पोस्टमार्टमका लागि धरान लैजाँदा गाडी, पोस्टमार्टम र काजकिरिया खर्च धान्न पसल बेच्नुपरेको उनले बताए ।
चेतनाथ गाउँमा बस्ने वातावरण नभएपछि ऋणपान गरेर इटहरीको हलगढास्थित आमाबुबाको घर पुगे । ६ महिनादेखि उनी गाउँ फर्किएका छैनन् । जग्गाजमिन बाँझै छ । आर्थिक अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको छ । छोरी र पत्नी निर्मला बिरामी छन् । ‘डाक्टरलाई देखाउँदा मानसिक चिन्ता भन्छन्, आमाबुबा पनि बुढेसकालको हुनुहुन्छ, म एक्लोले कता थाम्ने, गाह्रो भएको छ,’ निर्मलाले भनिन् ।
स्थानीय तहदेखि संसद्सम्म चासोको विषय बनेको यो घटना अनुसन्धान लम्बिँदै गएकामा प्याउलीवासी आतंकित छन् । साँझ पर्नेबित्तिकै ढोका थुन्छन्, बिहान अबेर खोल्छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्याउलीबजारमा अरुण गाउँपालिकाको कार्यालय बसेको छ । यस घटनापछि कर्मचारी पनि आतंकित छन् । घटना पहिचान हुन नसक्दा विद्यालय पढ्ने उमेरका विद्यार्थी त्रसित छन् । स्थानीय शारदा मावि प्याउलीबजारमै छ । अनुसन्धान सफल नहुनुले सुरक्षाको प्रत्याभूति खडकिएको शिक्षकहरू बताउँछन् ।
घटना रहस्यमै रहेपछि स्थानीय राजकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा २० सदस्यीय संघर्ष तथा दबाब समिति बनाइएको थियो । मुख्य सडक भोजपुर–लेगुवा नारदमुनी थुलुङ राजमार्गमा अरुण गाउँपालिकावासीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, तत्काल विस्थापित हुनबाट रोक्नुपर्ने, हत्यारा चाँडो पत्ता लगाउनुपर्ने, मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै समितिले चक्काजाम गरायो । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय एक दिन बन्दसमेत गरायो । सदरमुकाम आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि पठायो । तर कतैबाट चासो दिइएन ।
जिल्लास्थित राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठनहरूले पनि सदरमुकाममा र्‍याली निकालेर जिल्ला प्रशासनमा हस्ताक्षर बुझाए । तर, घटना अनुसन्धान कहाँ पुगेर अडकिएको छ, कोही बोल्न चाहँदैनन्